China Alloy Horn 35khz 500w Handheld Ultimate Welder ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Ike
Alloy Ma ọ bụ Titanium
500w ultrasonic na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
35khz ejiri ultrasonic welder
35khz ultrasonic aka welder
35kHz Ultrasonic Hand Welder Portable Ultimate Brass Inserts Equipment
Kedu‘s ụkpụrụ nke Ultrasonic ịgbado ọkụ plastic?
Mgbe ultrasonic na-arụ ọrụ na kọntaktị plastik plastik thermoplastic, oke ụda vibrations nke iri puku kwuru iri puku ugboro kwa nkeji. Igwe vibration a dị elu rutere n'otu njupụta, a na-ebunye ike ultrasonic na mpaghara weld site na mgbatị elu, n'ihi na mpaghara weld nwere nnukwu nguzogide mkpuchi, ya mere a na-emepụta okpomọkụ dị elu mpaghara. Ọzọkwa, n'ihi nrụrụ ọkụ na-adịghị mma nke plastik ahụ, enweghị ike ịgbasa ya na oge ma gbakọta na mpaghara weld, nke mere na ihu kọntaktị nke plastik abụọ ahụ gbazee ngwa ngwa, na mgbe nrụgide ụfọdụ gasịrị, ha na-agbanye n'ime otu. Mgbe ebili mmiri ultrasonic na-akwụsị, hapụ ka nrụgide ahụ ruo sekọnd ole na ole iji mee ka ọ sie ike, si otú a na-etolite ngwongwo ngwongwo siri ike maka ebumnuche ịgbado ọkụ, ike ịgbado ọkụ nwere ike ịdị nso na ike nke akụrụngwa. Ogo nke ultrasonic plastic ịgbado ọkụ na-adabere na njupụta nke transducer ịgbado ọkụ isi, na etinyere mgbali na ịgbado ọkụ oge. Enwere ike gbanwee oge ịgbado ọkụ na nrụgide ịgbado ọkụ. A na-ekpebi ọnụọgụ ahụ site na transducer na mpi ahụ. Onu ogugu ato a bara uru maka ibe ha. Mgbe ike karịrị uru kwesịrị ekwesị, agbaze agbaze nke plastic bụ nnukwu, na ịgbado ọkụ ihe na-adị mfe nkwarụ; ma ọ bụrụ na ume dị obere, ịgbado ọkụ na-esi ike, a gaghị enwe ike ịgbakwunye nrụgide etinyere. Nrụgide a kachasị mma bụ ngwaahịa nke ogologo nke akụkụ nke akụkụ welded na nrụgide kachasị mma kwa 1 mm nke nsọtụ. Ultrasonic ịgbado ọkụ bụ a elu-tech technology maka ịgbado ọkụ thermoplastic technology. Enwere ike ịhazi akụkụ roba thermoplastic dị iche iche site na ịgbado ọkụ ultrasonic na-enweghị agbakwunye ihe mgbaze, nrapado ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ inyeaka. Ihe dị na ya bụ ịbawanye arụpụta ọrụ ma belata ọnụahịa. melite ogo ngwaahịa.
Ultrasonic plastic ịgbado ọkụ ụkpụrụ: Na generator site 20KHZ, (ma ọ bụ 15KHZ) elu-voltaji, elu-ugboro mgbaàmà, site na ntughari usoro, atọghata mgbaàmà n'ime elu-ugboro n'ibu vibration, nke na-etinyere na workpiece nke plastic ngwaahịa, site na na-arụ ọrụ ala na intrinsic intermolecular Nsogbu na-eme ka okpomọkụ a na-ebufe ya na interface ka o bilie. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ ahụ rutere ebe mgbaze nke ọrụ ahụ n'onwe ya, ọ na-agbaze ọdụ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ ngwa ngwa, wee jupụta na ọdịiche dị n'etiti ihu. Mgbe ịma jijiji na-akwụsị, a na-eme ka ebe a na-arụ ọrụ dị jụụ ma dozie ya n'okpuru nrụgide ụfọdụ. , iji mezuo ịgbado ọkụ zuru oke.
Ihe Oke Advantage: Ngwa
28Khz ultrasonic aka welder
Generator Dijital jenerato
▪ Horn ahaziri
Aluminom alloy & ígwè & Titanium alloy
Ly Ike ọkọnọ: 220v 50 / 60HZ
1. ọkụ ọkụ, aka aka welder.The generator 120 * 120 * 380, dum weight5KG, na generator 4kg, na 28Khz aka welder 1kg, 35Khz aka welder 0.8kg. Suit maka aka ịrụ ọrụ.
2. Pụrụ iche alloy metal ụlọ, ụlọ nke aka-welder bụ ìhè ma guzosie ike, adịghị mfe na-nkwarụ, ogologo ọ ga-eji ndụ.
3. Igwe ọkụ dijitalụ, ọ nwere ike nyochaa ugboro ole ya onwe ya, ọ dị mfe ịrụ ọrụ. Mmepụta / ịgbado ọkụ oge mgbanwe, uwe maka ma aka rụọ ọrụ na igwe na-arụ ọrụ.
Eyi ịkwanyere Fabric kpara Pee ABS
PS naịlọn Pu PET niile Thermoplastic ihe, na ọkpụrụkpụ 8mm na max.
Suitdị edozi edozi maka aka / igwe na-arụ ọrụ.
Typedị ụdị egbe maka ọrụ aka.
PS naịlọn Pu PET niile Thermoplastic ihe, na ọkpụrụkpụ 5mm na max.
Maka ngwa ka mma, ọ ka mma ịkọrọ m ihe ọmụma niile, ihe, ọkpụrụkpụ, ụzọ ọrụ, ọsọ ọsọ tupu ịhazi.
Anyị na-enyekwa 20Khz 40Khz ultrasonic aka-weld welder.
Na sonotrode ejiri aka maka ịgbado ọkụ ultrasonic (bonding) dị ọkụ ma dị mma, nke kwesịrị ekwesị maka ọrụ aka ekpe ma ọ bụ aka nri. A kwadebere ya na usoro ikuku ikuku dị mfe, nke na-egbochi ngwaọrụ ikpo ọkụ na nkwụ site na ọsụsọ na nke a na-eme ka njikwa na ọrụ zuru oke.
Na sonotrode ejiri aka ultrasonic kwadebere ya site na ultrasonic generator type Sooonic HpW. Mpi na aka na-eme nke ihe dị elu, na-eme ka ndụ dị ogologo ma na-aga nke ọma.
Ọsọ nke ịgbado ọkụ: ihe dị ka sekọnd 5, dabere na ihe ahụ na nsonaazụ achọrọ.
Ngwá ọrụ ultrasonic na-eme ka ịgbado ọkụ dị elu na nke dị elu n'etiti akụkụ ndị a gbakọtara na-ejighị ihe ndị ọzọ.
Nkọwapụta Ngwaahịa: 1 - a pụrụ itinye welder aka na otu ịgbado ọkụ, ihe nkedo, riveting .2 - Nhazi a na-ebugharị, chekwaa ohere, mfe ịrụ ọrụ. 3 - enwere ike iji ya mee ihe, ma enwere ike iji ya na akụrụngwa akụrụngwa .4 - E bụ ihe ejizi ngwaọrụ, ọkachasị maka rhinestones / PC drill mount na haute couture processing .5 - Enwere ike ịhazi nhapụta nke Ultrasound.
Ike mmepụta Handheld ultrasonic ịgbado ọkụ mach ...
Hand ẹkenịmde Ultrasonic ịgbado ọkụ Gun na hazie ...
800W Ultrasonic Abù ịgbado ọkụ Machine Low Energy ...